Desktop Moksha: Fargeetii iftiimisay ee naga maqnayd | Laga soo bilaabo Linux
Waa wakhti fargeeto, ayuu yiri Jeff Hoogland. Soosaaraha Bodhi Linux wuxuu qaati ka taagnaa noocyada Iftiiminta ee 18 iyo wixii ka dambeeya wuxuuna yiri "Fuck, waxaan doonayaa fargeeto E17, waxaana ugu yeerayaa Moksha Desktop."
Barta Bodhi ayuu ku sharaxayaa: Iftiimintu waxay ka bilaabatay noqoshada 'Source Source Duke Nukem Forever' waxayna yeelatay sedex filim oo waaweyn 3dii sano ee ugu dambeysay. E18 aad ayuu ugu liitay gudaha gudaha in Bodhi xitaa uusan rabin inuu sii daayo noocaas.
E19 waxay ugu muuqatay mid isaga kafiican marka loo eego E18, laakiin inkasta oo uu waqti laqaatay la shaqeynta hormarinta iftiiminta iyo soo sheegida cilladaha, xitaa xitaa E19 uma aysan isticmaalin desktop maalinle ah. Waxay si dhib yar u sii daayeen E19, waxay horeyba u heleen inay la shaqeeyaan E20. Jahawareerka uu qabay wuxuu ahaa mid uu ku qaatay nasashadaas dheer ee ka dhigtay mid aan firfircooneyn.
Markuu soo noqday, wuxuu sii daayay Bodhi 3.0.0 oo leh E19 oo ah desktop-ka asalka ah iyo waliba muuqaal dhaxalgal ah oo leh E17 mashiinno duug ah. maadaama aysan u baahnayn laxamiiste inuu markasta firfircoonaado oo sidaa sifiican usocdo.
Laakiin waxa ugu muhiimsani waa in E17 uu lahaa waxoogaa shaqeyn ah oo E19 uusan lahayn, sida sanduuqa waxqabadka ama awoodda isku dhafka qaybaha mawduuca, taas oo kaa dhigtay inaad dib uga fikirto inay fikrad fiican tahay inaad u socoto nooca cusub. Sidaas ayuu la tashaday bulshada qaar badanna waxay ku raaceen Jeff. Kadib wuxuu qaaday dariiqii fargeeto.
Moksha wuxuu marka hore la midoobi doonaa qalabka desktop-ka ee uu ku daray Bodhi, ka dibna wuxuu ka soo saari doonaa astaamaha waxtar leh E18 iyo E19. Waxaa la filayaa in waqtiga Bodhi 3.1.0 uu soo baxo (bisha Agoosto), uu sii deyn doono sawiradiisa Moksha, iyo in E19 ay wali ku jiri doonto keydadka ciddii dooneysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Desktop-ka Moksha: Fargeetada Iftiimisay Waan Waynay
Federico Damien dijo
Jacaylka xisaabta, haddana fargeeto kale oo aan loo baahnayn? Muxuu Mr. Jeff u caawin waayey dadka ku jira Iftiinka halkii uu iskaga diri lahaa fargeeto dhan? : /
Jawaab Federico Damián
Qoraalka waxaan dhigay sababaha.
Maad aqrin maqaalka, ama, ma fahmin waxaad aqrisay.
Uguyaraan dhiiri galinta fargeetada kiiskani wuxuu umuuqdaa mid xaq ah, inkasta oo aakhirka ay tahay wax iska caadi ah, midkastana wuxuu sameeyo waxa uu rabo waqtigiisa laakiin kala qaybsanaan aad u badan 🙁
Qof waliba xor buu u yahay inuu ikhtiraaco wuxuu doono!
Wixii conga fargeeto kale, laakiin maxaan sameynaa, waa wanaagga iyo "xumaanta" adduunka duurjoogta, iyo sidoo kale kan lacag haysta wuxuu sameeyo wuxuu rabo, kan waqti iyo rabitaan leh ayaa sameeya fargeeto uu doonayo! (:
Dunida Linux waxay noqoneysaa mid naxdin leh, halkii laga abuuri lahaa softiweer biil ah ama wax la mid ah laakiin taasi way shaqeysaa waana fududahay in la qaabeeyo, macno malahan hadii la bixiyo, waxay ku noolyihiin ku soo noqnoqda isla dhacdooyinka marar badan mararka qaarkood xitaa waxaan rabaa inuu ka tago markabka.
Magaca ayaa wada leh: Moksha = xoreyn, xoreyn. Xaaladdan oo kale, waa inaad naftaada ka xoreyso jahwareerka aan laga dhageysan karin horumariyeyaasha. Jeff wuu ku saxsan yahay inuu dhaleeceeyo inuusan awoodin inuu xiro muusigga gebi ahaanba. Waxaan ku isticmaalaa E19 laba mashiin oo 32-bit ah waxaanan ogaanayaa inaysan u muuqan "iftiin" sidii waagii hore.
Taasi waxay tiri, uma arko qiil u sameynta fargeeto sidoo kale. Isticmaalayaasha KDE way dhibaatoodeen sannadihii hore ee KDE 4, waxayna umuuqataa inay isku mid yihiin E. Waxaa laga yaabaa in horumariyayaashu ay yihiin "kuwo la iftiimiyay" oo aysan sifiican u dhageysan, laakiin sidoo kale waxaan dareemayaa xawaare dhakhso leh oo ku saabsan isbeddelka Iftiiminta. Waxaan sidoo kale khatar u arkaa kala qeybinta beel yar. KDE wuu badbaaday oo Saddexmidnimada wali way joogtaa hadda. Bulshada isticmaale Gnome waxay ku guuleysteen inay heystaan ​​labo fargeeto: MATE iyo qorfe (labadaba waa wanaagsan yihiin, laakiin aan loo baahnayn). Su'aashu waxay tahay, ka warran E marka ay jiraan oo keliya 2 "E-centric" distros (Bodhi iyo Elive) iyo dhowr kale oo bixiya wax ka badan ama ka yar oo aan la taageerin?
Ma ii sharixi kartaa, maxaad ugu aragtay jiritaanka MATE iyo qorfe lama huraan? Waxaan isku dayay labadaba 'Des' waxaanan helay inay leeyihiin niche. Hadda waxaan isticmaalaa Plasma 5 laakiin waxaan jecelahay sida fudud ee loo maareeyo MATE tusaale ahaan iyo isdhexgalka quruxda badan ee Cinnamon, laakiin halkaas laga bilaabo in la yiraahdo jiritaankeedu waa mid aan loo baahnayn ayaa iga dhigaysa inaan ka fikiro ...
Waa hagaag, adigu waxaad siisaa doodaha naftaada waxay ku hogaamisay hogaamiyaha mashruuca Bodhi Linux inuu sameeyo fargeeto: E17 wuxuu u arkaa inuu ka iftiimsan yahay E18 iyo E19 ma aysan horumarin si la taaban karo wixii nuqulkii hore dhacay, iyadoo lagu daray shuruudaha dheeraadka ah ee laxamiistaha garaafka ka tagista kooxo badan oo u dhaqaaqay E17 si dhib yar oo ka baxsan suurtagalnimada oo dhan markii ay ku jirtay qaab muuqaal iyo astaamo waxay bixisay xitaa wax ka yar E17 (taas oo ah, falgal buuxa) iyo maadaama aysan sii wadi karin horumarka E17 si rasmi ah, waxay dooratay inay abuurto ka soo qaadashada koodhka ilaha nooca ugu dambeeya isla markaana ka bilaabaya mashruuc cusub oo lagu fulinayo horumarin madax bannaan oo ku saabsan go'aannada "kooxda asaasiga ah" ee E.
Haddii aysan jirin wado lagu heshiiyo laba mowqif oo iska soo horjeeda, oo asal ahaan ka kooban iyada oo la marayo giraanta E ee "kooxda muhiimka ah" ama aan ahayn, iyo tan iyo liisanka bilaashka ah ee maktabadaha iyo codsiyada E (BSD, GPL iyo LGPL) ayaa noo oggolaanaya inaan ka boodno Dhibaatada been abuurka ah ee caadiga ah iyo tan been abuurka ah, waxaan dooranay dariiqa seddexaad iyo voila, fargeeto ka mid ah laanta mashruuc (E17) ee E "" core team "aysan sii haynin maxaa yeelay gadaal ayey uga tagtay maxaa yeelay siyaasadeeda waa inay markasta isku waqti ahaato. ugu dambayntii (E20 hadda), si qofku u doorbido inuu ka bilaabo koodhka isha ee E17 si uu u ilaaliyo oo uu ugu daro horumarin laakiin falsafada diiradda saareysa waxqabadka iyo shuruudaha farsamo ee hooseeya ee E17 waa wax aan u maleynayo in qofna aan la dhibsan oo jecel inuu isticmaalo ama wax ku biiriso (iyo xitaa mar labaad u samee), waa bilaash in la sameeyo, taas oo ah quruxda adduunkan oo dhan ee barnaamijka bilaashka ah.
Maaddaama aad laba tusaale bixisay, kaliya Mate waa midka ay u eg tahay, Gnome 2.x waa laga tagay iyada oo loo rogay Gnome 3.x, ma ahayn dib-u-cusbooneysiin fudud, wax walba oo cusub, qaab-dhismeedka cusub ee maktabadda, maktabadaha cusub (GTK + 3) ), iwm, laakiin waxaa jiray dad doorbiday muuqaalka 'Gnome 2.x paradigm', qayb ka mid ah waxqabadka sare ee kombiyuutarada aad u yar, si fiican, waxba, waxay bilaabeen inay abuuraan Mate halkaasna waxay ku leeyihiin isticmaaleyaal badan oo ka doorbida deegaanka desktop-ka Gnome 3.x (iyo xitaa sidaa darteed gebi ahaanba kuma xirna waagii hore waxayna u gudbinayaan Mate ilaa GTK + 3), wax ka duwan ayaa ah Cinnamon, oo ku saleysan Gnome 3.x wuxuu doorbidaa inuu yeesho qaab u gaar ah iyo horumar madaxbannaan, laakiin iyaguna sidaas oo kale ayey yeelaan, Ka faa'iideyso faa'iidooyinka softiweerka bilaashka ah, marka aadan wax jeclayn oo aysan kuu oggolaanayn inaad wax ka beddesho maxaa yeelay qof kale ayaa maamula barnaamijka oo waxaad ku darsan kartaa oo keliya meesha iyo sida ay kaaga tagayaan, maxaa yeelay waxaad madaxbannaan tahay oo aad adigu abuureysaa adiga oo isticmaalaya waxa lagama maarmaanka ah iyo waxa aad ka jeceshahay. hore u jirtay, taas oo markaa marwalba jirta brá peña oo aragtidaada ka jecel in ka badan dhibcaha gaariga (ama maahan, laakiin waa wax ay qaadaan kuwa ku kacda tacabiyadaan guud ahaan).
Tani waa waxa ku dhaca mashruucyada softiweer, ha ahaadaan kuwo bilaash ah iyo haddii kaleba, koorsada guud ahaan waxaa qaata qaar yar, haddii sidaad u sheegto aysan ahayn inay jiraan qaybisyo badan oo Linux ah oo u qaadaya E heerka iyo dusha sare ee aan laga dhageysanayn dayactirayaashooda, sidoo kale Meel yar oo maneuver ah ayaa loo daayay iyaga haddii aysan la liqin waxa kuwa goynaya codku yiraahdaan iyo, oo ay ku sii socdaan isbarbardhiga gastronomic, in iyagana ay yihiin kuwa go'aamiya sida loo kariyo, iyada oo aan la tixgelinaynin cuntada kale ee kuwa sida dhabta ah wax u qaybiya suxuunta loo diyaariyey martidaada ...
Anigu ma isticmaalo Bodhi Linux markaa anigu fikir ma haysto, laakiin haddii bulshadaadu u codaysay isbeddel waa go'aankooda waana in la ixtiraamo.
Go'aanka ah in la sameeyo fargeeto cusub ayaa aniga ila muuqata. Anigana aragtidayda dib uma noqonayso, ee waa horay u socosho, laakiin waddo ka duwan. Haddii wax aad u wanaagsanaayeen, waa la dayactiri karaa oo xitaa waxyaabo kale oo ka sii wanaagsan baa la sii hagaajin karaa.
Waxaan isku dayay Bodhi waqti dheer oo nooca 3 ahaa mid aad u xun, sababtoo ah qashinka khayraadka iyo khaladaadka ay sameeyeen E17 interface.
Maanta waxaan isu keenayaa nafteyda iyo hiwaayadeyda, sawirkeyga Debian 8 rakibkiisa E17, oo aan nidaam lahayn.
Kala-sooc lagama maarmaan ah, maxaa yeelay dadka iftiiminta ayaa dhab ahaan iska indha-tiraya soo-jeedinta isticmaaleyaasha maalinlaha ah.
In kasta oo Iftiimintu aad u fiican tahay marka loo eego shuruudaha yar ee ay u baahan tahay, haddana la’aanta codsiyada lagama maarmaanka ahi waa barta ugu liidata.
Aad ayey u fududahay in la isticmaalo, waxaanan rajaynayaa halkii aad ka ahaan lahayd Maamulaha Daaqadda sida Iftiiminta, inaad abuuri karto barnaamijyo aad u tiro badan oo ah inuu yahay mid dhammaystiran Degaanka.
Khilaaf kale ayaa ah tusaale ahaan E17, E18, E19 iyo E20, iyagu ma ahan Retro / Compatible, gaar ahaan qaabeynta muuqaalka desktop-ka, taas oo ah, ma isticmaali kartid mawduuc E17 ah E18 / 19/20 ama taa bedelkeeda
Haddii lammaanaha uu ahaa mid aan loo baahnayn, lama abuuri lahayn, waxaa loo abuuray si sax ah maxaa yeelay dad badan ma aysan doonaynin ama rabin Gnome3, ama Midnimo, maadaama dadka isticmaala ay weydiinayeen Cannonical isla markaasna ay la soo baxeen: «GTK2 waa dhimatay, waa la joojiyay Waa wax fool xun, aan waxtar lahayn, cidina ma rabto intaas ka dib Tani ma aha dimuqraadiyad. Taasi waa sababta LinuxMint u ballaarisay Gnome2 oo leh Mate intii suurtagal ah ka dibna u gudbisay GTK3. la mid ah qorfe, Budgie, Pantheon, Solus
Waxa aan loo baahnayn waa faraca qaybinta ee ka soo jeeda gaar ahaan Ubuntu, taas oo ay ku kacaan oo dhan waxay beddelaan "Farshaxanka" (Koontaroolada / Badhamada / Baararka Wareegyada ah, Mawduuca Icon, Mawduuca Mawduucyada, Xilliyadii Hore ee Dhalashada). taasi runti kama bixiso wax faa'iido leh, kala-qaybsanaan aan loo baahnayn iyo jahwareer badan oo loogu talagalay kuwa hadda bilaabaya ee aaminsan in qaybinta kasta ay tahay Nidaam Hawl-gal oo ka duwan.
Sababtoo ah ma fahmin in qaybintu ay asal ahaan tahay Software horay loo sii dejiyey oo ay ku jiraan Qaabdhismeedka Hore. oo kulligoodna waxaan isticmaaleynaa isla qalliinka, waxa run ahaantii ku kala duwan waa noocyada barnaamijka la adeegsanayo.
Telefoonada gacanta ee Zuum ee Mexico
Zuum P360 wuxuu maamulaa inuu saameyn ku yeesho suuqa